Voan'ny aretin'i Darodar ny aretinao ve ny computer? & Ndash; Ny Semalt no mahafantatra ny fomba fitsaboana azy!
Voan'ny aretin'i Darodar ny aretinao ve ny computer? - Ny Semalt no mahafantatra ny fomba fitsaboana azy!
Tokony ho efa nandre ny olona sasany ianao izay milaza fa Darodar dia hita ao amin'ny kaonty Google Analytics. Ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mamorona sivana mba hanakanana ny domain Darodar. Raha tsy naheno na inona na inona momba ilay olana ianao, avelao aho hilaza aminao fa ity serivisy ity dia mandefa crawlers sy bots amin'ny tranokalanao, miondrika mba handefasana fifamoivoizana ara-dalàna. Raha mahita fitomboana tampoka amin'ny isan'ireo pejy ianao, dia tsy maintsy jerena ny mpitsidika ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Ny tena mety ho an'i Darodar dia mandefa anareo fifamoivoizana sandoka ary manandrana mamitaka anareo amin'ny fomba maro. Tokony ho tsaroanao fa hampitombo ny fatran-tseraseranao toy izany ny fifamoivoizana toy izany.
I Lisa Mitchell, Semalt Manager Success Manager, dia manazava fa Darodar dia programa SEO misy laza malaza amin'ny aterineto. Olona maro no nametraka fanontaniana tao amin'ny forums momba ity serivisy ity sy ny fomba hanakanana na hanafoanana azy io. Misy vahaolana vitsivitsy ary fomba vitsivitsy hangatahana ny tranokalanao mba tsy hikorontana avy amin'ity orinasa ity. Na dia izany aza, aleontsika tsy miresaka amin'ny code code amin'ny Internet raha tsy mila isika. Ilaina ny fifandraisanao amin'ny olon-kafa ary manome ny adiresinao ao amin'ireo izay itokisanao indrindra. Ny ankamaroany, tsy tokony hanamarina ny tolotrasa Darodar ianao ary tsy manelingelina ireo fonosana ambany. Ireo bots ireo dia hamafa ny antontan'isa ao amin'ny tranonkalanao, manimba ny sehatry ny fitsidihana, ny taham-pitenenan-tserasera, ary ny faharetan'ny fitsidihana amin'ny ankapobeny. Izany rehetra izany dia tsy mahafinaritra ho an'ny tranokalanao ary tokony ho nesorina tsy ho ela araka izay azo atao.
Manao tatitra amin'ny fampiasana tranonkala samihafa amin'ny fanangonana vaovao momba ireo tranonkala ary avy eo mamadika ny angon-drakitra ao amin'ny orinasa. mba hanamboarana ny karoka fikarohana .
Manao asa tsara ny Google Analytics, anisan'izany ireo robots tsy mitsahatra amin'ny fitsidihana ny tranokalanao, fa ireo mpitifitra an'i Darodar kosa dia nahavita namakivaky ny sakana sy fitohanan'ny fifamoivoizana ary tsy manimba ny fifamoivoizana.
Ny vaovao tsara dia ny hanakana an'i Darodar amin'ny Google Analytics anao. Ao anatin'ny kaontinao, misy singa iray hanakana ny darodar.com sy ny buttons-for-websites.com. Afaka mampiasa io endri-javatra io ianao mba hisakanana ireo karazana spiders sy bots rehetra ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Ary eto isika dia manana ny torolàlana ety amin'ny dingana mba ahafahana mametraka izany. Ny tsara indrindra sy antenainay dia hahazo tombontsoa avy amin'izany ianao: 8)
Sokafy ny kaonty Google Analytics ary mandehana any amin'ny sehatr'asa Admin eo an-tampony.
Eto ianao dia mahita seza telo: Property, View, ary Account. Eo ambanin'ilay sehatra View dia tokony kitiho ny safidin-tsinjara View
Avereno jerena ny boaty rehetra izay milaza hoe "Esory ireo fitsapana avy amin'ny andian-java-bady sy fanta-daza."
Mino izahay fa io no fomba tsotra sy haingana indrindra hanakanana ny fifamoivoizana an-dalamby avy any Darodar. Azonao atao koa ny manakana ny bots rehetra, sy ireo jiro fantatra amin'ny tatitra avy amin'ny Google Analytics Source .